မူကြိုအရွယ်သားအတွက်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ဂိမ်းများ, အသက်ပျိုကျောင်းသားများ, ကျောင်းက
စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ဂိမ်းများ - တစ်ဦးဖန်တီးမှုလူတစ်ဦးကြီးထွားကူညီရန်9လှုပ်ရှားမှုများ
မှန်ကန်သော, သဟဇာတ သူငယ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ၎င်း၏လျင်မြန်သောလူမှုဆက်ဆံရေးစေတယ်။ ကလေးများကစနစ်တကျသူတို့အကြံအစည်ကိုဖော်ပြကျောင်းကောင်းသောအမှုကိုပြုပေးနိုင်အဆက်အသွယ်, တည်ထောင်ရန်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဂိမ်း၏အစောပိုင်းအဆင့်ဆင့်၏အရေးပါမှုကိုအတွေးနှင့်မိန့်ခွန်းကိုလှုံ့ဆော်သောစိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ရှိသည်။
အဓိပ္ပာယ် - စိတ်ကူးစိတ်သန်းဆိုတာဘာလဲ
စိတ်ကူးစိတ်သန်းအဖြစ်မှန်အတွက်ရိပ်မိကြသည်မဟုတ်ကြောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်အမြင်များ၏ဖန်တီးမှုကပါဝင်ပတ်သက်ရသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပုံစံ, ဟုခေါ်သည်။ လှုပ်ရှားမှု၏ဤအမျိုးအစားကလေး၏အာရုံခံအတွေ့အကြုံကိုအတွက်ရှိနေခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတက်ကြွစွာ3မှ 10 နှစ်အထိအနေဖြင့်ကာလ၌တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုပြီးနောက် passive ပုံစံသို့ဝင်။ လက်ရှိခွဲခြားအဆိုအရ, စိတ်ကူးစိတ်သန်းသည်:
စိတ်ကူးယဉ်၏စိတ်နှလုံးမှာအရာဝတ္ထု၏ပုံတွေကိုမှတ်ဉာဏ်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုအသဘောထားအမြင်၏ရုပ်ပုံများကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ မရှိရင် စိတ်ကူးစိတ်သန်း ဟာဖန်တီးမှုလှုပ်ရှားမှုမဖြစ်နိုင်ပါ။ ထူးခြားသောရှာဖွေတွေ့ရှိရာ၌ခန့်ထားပြီသောသူအပေါင်းတို့သည်ပါရမီနှင့်တောက်ပသောလူများ, အလွန်အမင်းတက်ကြွစိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိကြ၏။ သူငယ်၏လှုပ်ရှားမှုတာစိတ်ကူးစိတ်သန်းများစဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်ရာကြာပါသည်။ ဒါဟာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, သားသမီးများ၏ပညာရေးအောင်မြင်မှုဖွဲ့စည်းရေးအတွက်အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတစ်ဦးမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းနေတဲ့ဂိမ်းပုံစံဖြစ်ရပါမည်ဖွံ့ဖြိုး။ ဒါဟာစိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းစိတ်တွင်ဘွားမြင်သင့်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကအပြိုင်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့မကြာခဏပြောပြ, ကလေးများစာအုပ်တွေကိုဖတ် ပုံပြင်များ ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်တကွသူငယ်ကြှမျးဝငျဖို့။ စိတ်ကူးယဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စတင်ကလေးစကားပြောသည့်အခါယခုအချိန်တွင်နိုင်ပါတယ်။3နှစ်များတွင်ကလေးအတော်များများပြီးသားတက်ကြွစွာ fantasize နှင့်စိတ်ကူးရှိပါတယ်။ ဒါဟာအသက်အရွယ်ကလေးတစ်ဦးရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စံပြဖြစ်စဉ်းစားသည်။
အဆက်မပြတ်ဂိမ်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ကလေးတွေကကျူးလွန်အားလုံးပြုမူသောအမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ် - ဒါဟာကလေး၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကြောင်းအကောင့်သို့ယူရန်လိုအပ်ပေသည်။ ကလေးသူငယ်အခနှင့်အတူအပြန်အလှန်၏ဤပုံစံအပြည့်အဝပြင်ပကမ္ဘာ၏အသိပညာအတွက်သေးငယ်တဲ့သက်ရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းကျေနပ်။ ကလေးတစ်ဦးရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သူအဖြစ်မှန်အတွက်တည်ရှိကြောင်းအစားထိုးအရာဝတ္ထု၏ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာကိုယ်နှိုက်ကိုထင်ရှားစွာပြမှစတင်ခဲ့သည်သည်လူမှုရေးအခန်းကဏ္ဍအပေါ်ကြာပါသည်။
ကလေးရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်ဂိမ်းများကို 100% မှအာရုံစူးစိုက်မှုပါဝငျသညျ။ ကလေးသူငယ်အခသတင်းအချက်အလက်များအလွတ်ကျက်လျင်မြန်စွာ, ကစားရန်လွယ်ကူသည်ရိပ် မိ. ။ ရလဒ်အဖြစ်နောက်ဆက်တွဲထဲမှာယခင်ကမိမိတို့ကိုယ်ကိုတှေ့မွငျရမျိုးပွားရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။ substituents တဖြည်းဖြည်းနောက်ခံသို့နွမ်းနေကြသည်, သူတို့ကပျော်စရာအဘို့ကစားရန် start တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စိတ်ကူးစိတ်သန်းပစ္စည်းများနှင့်အတူမူကြိုကျောင်းသားများ။ ဒီအဆင့်မှာနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းဟာဖန်တီးမှုအတွက်ပုံစံ recreates တစ်ဦးအကူးအပြောင်းလည်းမရှိ။
မူကြိုကလေးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်အားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်စိတ်ကူးစိတ်သန်းအခန်းကဏ္ဍတိမ်းညွတ်ရှိသည်။ အဆိုပါကလေးများ 4-5 နှစ်ကအခြားလူတစ်ဦးကိုသူတို့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာချင်ပါတယ်အဘယျသို့စိတ်ကူးယဉ်, ကွဲပြားခြားနားသောအသက်မွေးဝမ်း "ပေါ်တွင်ကြိုးစားကြ" ၏အခန်းကဏ္ဍများတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။ အတန်းထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းအတွက်အကျိုးစီးပွားကိုချွတ်စစ်တိုက်ခြင်းငှါမဟုတ်, 20-30 မိနစ်ထက်မပိုသင့်ပါတယ်။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းမူကြိုသားသမီးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်ဦးကအလွန်ကြီးစွာသောအကူအညီရိုးရှင်းတဲ့ဂိမ်း " .... သင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ" နိုင်ပါတယ်
ထိုသို့သောလေ့ကျင့်ခန်းအပြိုင်နှင့်သရုပ်ဆောင်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေ။ ကလေးကဖေဖေ, စကားလုံးတစ်လုံး၏သူဖော်ကျူးသင့်ကြောင်းအကြောင်းအရာထင်၏။ မေမေရဲ့အလုပ်အကိုင်အမှန်ကန်သောအဖြေကိုခန့်မှန်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ပျက်ပြယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းဟန်ဆောင်, ဖြေဆိုရန်ဆောတလျင်မသငျ့သညျ။ သေချာပေါက်သူငယ်ကိုခြီးမှမျးပါနှင့်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍကိုပြောင်းလဲဖြေဆိုပြီးနောက်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့မူကြိုကျောင်းသားများ၏ဖန်တီးမှုစိတ်ကူးစိတ်သန်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပေါ်တွင်ဂိမ်းအားလုံးအိမ်ထောင်စုဆွဲနိုင်ပါတယ်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအောက်ပါပြသနေပုံပါဘဲ။
စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ပြီးသားကျောင်းအတွက်စာရင်းသွင်းသူကလေးတစ်ဦး၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောနေတာ, ဆရာ, ဆရာမဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်မိဘမြား၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍသတိပြုပါ။ 7-8 နှစ်ပေါင်းကလေးများသူတို့ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကိုင်ရသောလုံလောက်သောအသိပညာအခြေစိုက်စခန်း, ကျွမ်းကျင်မှု, ဆည်းပူး။ ကလေးသူငယ်အခပြီးသားအများအပြားပုံရိပ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ဒါကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတာဝန်မှန်ကန်သောပေါင်းစပ်သင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သားသမီးများကအဖြစ်မှန်အတွက်ဘယ်လောက်နားလည်ရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်မည်သို့ - မျှ။ ဤအတာဝန်များကိုကိုင်တွယ် "Wonder သစ်တော" ဟုအဆိုပါဂိမ်းကူညီပေးသည်။
ကြိုတင်မဲအတွက်ကိုပြင်ဆင်စာရွက်တစ်ရွက်တွင်ရမှတ်, လိုင်းများနှင့်ပုံစံမျိုးစုံ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားဖြင့်ဝိုင်းရံအများအပြားသစ်ပင်များပုံဖော်။ ကလေးတစ်ဦးတောအုပ်သို့လှည့်ရန်ရှာကြံခြင်းမပြုမီ။ တိုတောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်စေလျက်, ပြသသည်ကိုပြောပြရန်သူငယ်ကိုမမေး - ပန်းချီကားကိုလက်စသတ်ပြီးနောက်, သင်ကအလုပ်လုပ်ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။ (Pre-ညှိနှိုင်း) ဒါဟာလက်တွေ့ဖြစ်စေခြင်းငှါ, တစ်ခုယူဆ။
သငျသညျကျောင်းနေအရွယ်သားသမီးများ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖွံ့ဖြိုးမီ, မိဘများရှင်းလင်းစွာကသူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုသိရပေမည်။ ဒါကသူ့ကိုနှင့်အဆက်အသွယ်ထူထောင်ရန်လျင်မြန်စွာအဲဒီဂိမ်းကိုစိတ်ဝင်စားသူ့ကိုကူညီပေးပါမည်။ 3-5 ကလေးများစိတ်ကူးစိတ်သန်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပေါ်ဤအကြောင်းဂိမ်းကိုသုံးနိုင်သည်အဆင့်နှင့်အတူအတန်းများအတွက်:
"non-တည်ရှိတိရိစ္ဆာန်" ။ တစ်ဦး sawfish လည်းမရှိလြှငျ, ပုဆိန်-ငါး၏တည်ရှိမှုကိုလည်းဖယ်ထုတ်လိုက်ခြင်းမရှိပါ။ ကလေးသူငယ်အခကစားဘာစိတ်ကူးနှင့်ကိုဖော်ပြရန်, ဒီသတ္တဝါတူမယ်ဖို့တောင်းနေသည်။
"တစ်ဦးကစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်း။ " သင့်ကလေးနှင့်အတူစာအုပ်ထဲတွင်အနည်းငယ်ဓါတ်ပုံတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါနှင့်အသစ်သောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု, ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်းကိုတက်ဆွဲရန်သူ့ကိုမေးကြည့်ပါ။ ဤသည်၌မိဘများတက်ကြွစွာပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်သင့်သည်။
"ပန်းချီ Continue" ။ မိဘများဟာရှုပ်ထွေးပုံစံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည်ထားတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်, အရေအတွက်, ပုံဖော်။ စက်ဝိုင်းထဲကမျက်နှာတစ်ဘောလုံးကိုတစ်ကားကိုဘီးပုံဖော်။ တဦးတည်းကကမ်းလှမ်း Options ကို။
ကလေးတစ်ဦးရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် - လှုပ်ရှားမှုများမကြာခဏအပြောင်းအလဲများကိုပါဝင်သောရှည်ဖြစ်စဉ်ကို။ ဆိတ်တက်ထိုင်လျက်လျှင်, စာအုပ်မှာရှာဖွေနေ, drawing, ရွေ့လျားတစ်ခုခုသခင်နှင့်အတူကစားရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ရပါမည်။ ဒါကစိတ်ဖိစီးမှုဖယ်ရှားပစ်မည်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအလွတ်ကျက်ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ချိုးပြီးနောက်, သင်လေ့ကျင့်ရေးကိုဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။
ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း ဟာစိတ်ကူးစိတ်သန်းအပေါ်ကျယ်ပြန့်သည့်ကုန်သွယ်ကွန်ယက်တွင်ကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့တစ်ခုခုဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်ဤနေရာလေးကို tools များအတွက်အသုံးချဖို့, ဂိမ်းအတူတက်လာဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်
ဆောက်လုပ်ရေး။ ကလေးများတည်ဆောက်ရန်ကိုချစ်။ အဆိုပါပစ္စည်းလုပ်ငန်းခွင်, သဲ, သစ်ပင်ရှိတဲ့အကိုင်းလာနိုငျသညျ။
ခြင်း simulation ။ ကလေးတွေနဲ့အတူမိဘများစက္ကူအရုပ်စားဆင်ယင်ဖြစ်စေလျက်, စက်၏သူ့ကိုယ်ပိုင်ပုံကြမ်းပေါ်စက္ကူကော်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးတစ်ဦး၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းအတွက်ရိုးရာဂိမ်းကအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အားလုံးအကျွမ်းတဝင် "ပင်လယ်လှိုင်းတံပိုး ... " မျိုးဆက်မှမျိုးဆက်မှလွှင့်ထုတ်သည်နှင့်၎င်း၏လူကြိုက်များမဆုံးရှုံးပါဘူး။ အခြားမိုဘိုင်းဂိမ်းတွေထဲမှာ:
"ငါ့နာမကိုအမှီစကားကိုနားထောင်ကြလော့။ " ကလေးများပါတီအမညျကိုခေါ်ဆိုခြင်း, ဘောလုံးကိုပစ်ဦးဆောင်နောက်ကျောကျောတစ်စက်ဝိုင်းရပ်တယ်။ အဆိုပါကလေးသည်ပတ်ပတ်လည်လှည့်နဲ့ဘောလုံးကိုဖမ်းရမည်ဖြစ်သည်။
"သားပိုက်ကောင်" ။ အဆိုပါကစားသမားအညီတက် Line နဲ့ခြေထောက်အကြားဘောလုံးကို Clamp ။ အဆိုပါအချက်ပြမှုမှာသူတို့ 20-30 မီတာအကွာအဝေးမှာသတ်မှတ်ထားသော finish ကိုလိုင်းမှပြောင်းရွှေ့ခုန်စတင်ပါ။ ဘောလုံးကိုကျလျှင်, သင်ကကောက်နှင့်လှုပ်ရှားမှုဆက်လက်။
"မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး" ပေါ်တွင်လက်မှုပညာ - 55 ဓါတ်ပုံ
အဆိုပါကလေးသည်2နှစ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါ
Bronhomunal - Analogues
ဒယ်အိုးထဲတွင် zucchini နှင့်ကြက်သွန်ဖြူကြော်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Pokeweed - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ
မိမိတို့လက်နှင့်အတူ Frameless ပရိဘောဂ
မီးဖို၌အပေါက်များတွင်ဝက်သား - ချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာ၏အရသာချက်ပြုတ်နည်းများအမျိုးမျိုး
ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ကိုအဘယ်သို့ မှစ. ?
သူတို့ရဲ့အယူခံ outgrown ကြသူ 14 ကြယ်ပွင့်ကလေးများ
အမ်မလီ Ratazhkovski ကနေပေးဝေရေး၏စည်းမျဉ်းများ: နံနက်စာအဘို့နှင့်ညစာအဘို့ကော်ဖီခွက် - ကောင်းတစ်ဦးကင်!
အဲဒါကိုယုံကြည်သို့မဟုတ်မ .. နှင့်ရှိသည်: 10+ မယုံနိုင်လောက်အောင်အောင်မြင်သောန်ထမ်းများ